Thenga i-Noopept powder (157115-85-0) Abavelisi kunye noMzimveliso
I-Noopept powder (157115-85-0)
I-Noopept powder yinto eyenziwe ngayo. Ihlala ithathwa njengelinye lamachiza akrelekrele athembisayo kwimarike, umgubo unokusetyenziselwa ukuphucula ukusebenza kwengqondo. Iza nezinye iipropathi ze-neuroprotective ebalulekileyo. I-Noopept sisiyobisi esichaphazelekayo esitsha. Ibonise ukuba inokuthenjwa ngakumbi kwaye isebenzayo ngokuthelekisa enye i-Nootropics ekuboneleleni ngoku. Yintoni eyenza i-Noopept powder ibambe yindleko. Nokuba iyasebenza, ikwabiza ixabiso elincinci xa kuthelekiswa namanye amachiza alumkileyo. UNoopept unokuba nezinye izibonelelo zempilo ezibalulekileyo. Okwangoku, kuninzi okuthembisayo kophando okujonga kwiNoopept njengonyango olunokwenzeka lokubetha, unxunguphalo kunye nokudakumba.
I-Noopept powder (157115-85-0) ividiyo
I-Noopept powder (157115-85-0) Ulwazi olusisiseko
igama Noopept powder
Igama leKhemikhali I-ethyl (2-phenylacetyl) -L-prolylglycinate
Iintetho ezifanayo DVD-111; I-GVS-111; SGS-111; DVD111; I-GVS111; SGS111; DVD 111; I-GVS 111; I-SGS 111; Omberacetam
I-Molecular Formula C17H22N2O4
Isisindo somzimba 318.367 g / mol
Indawo yokunyibilika 97 ° C-98 ° C
InChI Key I-PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Ubomi obulicla Imizuzu ye-30-60
Umzimba Nyibilika emanzini; Ukunyibilika kwi-DMSO
yoGcino Imeko 0 - 4 C ixesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki), okanye -20 C ixesha elide (iinyanga).
isicelo I-Noopept yi-peptide ekhuthazwayo njengendlela yendalo yokuphucula imisebenzi yengqondo.
Yintoni i-Noopept powder
I-Noopept powder yi-peptide elenziweyo elisetyenziselwa ukuphucula umsebenzi wengqondo. Nangona ichiza lithathwa njengelisha, lenene belikhona ixesha elininzi. UNoopept waqala waphuhliswa eRussia kwiminyaka yoo-1990. Iyeza laqulunqwa ukuzama nokunyanga ukuthoba umsebenzi wokuqonda phakathi kwabantu abadala. Injongo yayikukukwenza kube ngexabiso eliphantsi ukuze ubani akwazi ukuyithenga.
Nangona kunjalo, emva kovavanyo oluyimpumelelo kwizifundo zovavanyo ezindala, kwacaca ukuba kukho ukubanakho okungaphezulu kweNoopept. Nditsho nabantu abancinci banokulinyusa ichiza ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo kwaye ngokusekwe kuninzi lweNoopept powder reddit izimvo, kubonakala ngathi uninzi lwabantu lunalo. Izilingo zakwangoko zikwabonakalise ukuba iNoopept inamandla okunyusa amanqanaba amandla kunye nokuphucula impilo yonke.
I-Noopept iphuhliswa yiPiracetam. Esi sisizathu sokuba uqaphele uNoopept kunye nePiracetam abathetha ngayo kwizivakalisi ezifanayo. Ukuphuhliswa kweNoopept nayo kwakungekho ngokukhawuleza. Kuthathe inzululwazi eRussia malunga ne-6 iminyaka ukukhulisa ngokupheleleyo kunye nokuvavanywa ichiza. UNoopept weza kwimakethi okokuqala ngqa ngo-1996. Nangona kunjalo, ayikhange ikhabe kwihlabathi jikelele kude kube ngoku.
Ngaba i-Noopept powder yiRacetam
IiRacetams ziludidi lwamachiza eNootropic aqondwa ukuba asebenzise ii-glutamate receptors kwingqondo. Ii-receptors ezisebenzayo ze-glutamate emva koko zenziwe zangqinwa ngee-cholinergic receptors. Le nkqubo inceda ekuphuculeni inkumbulo kunye nokunye ukusebenza kwengqondo. Ke, ngaba iNoopept yiRacetam? Ewe kunjalo. Ezinye zeziyobisi ziqhelekileyo kwiRacetam kwintengiso zibandakanya iAniracetam, ipramiracetam, kwaye ikakhulu iPiracetam.
Njengoko sele siphawulile apha ngasentla, uNoopept waphuhliswa ukusuka ePiracetam kwiminyaka yoo-1990. Kusenokwenzeka ukuba inezakhiwo ezifanayo nePiracetam. Ngaphandle koku, ichiza alifani ukuthathelwa ingqalelo okanye ukwahlulwa njengeRacetam. Kodwa isebenza kakhulu kwiRacetam. Ngaphandle koko, injongo ephambili yeRacetams kukunceda ukuphucula inkumbulo kunye neminye imisebenzi yengqondo. Kukho ubungqina obaneleyo bokubonisa ukuba uNoopept unalobu buchule. Njengombandela wokwenyani, i-Noopept sublingual empeleni yenza oko ngokungcono kunamanye ama-Nootropics phaya.
I-Noopept vs. Piracetam
Nawuphi na umntu obesebenzisa iiNootropics uyazi malunga neNoopept kunye nePiracetam. Zonke ezi ziyobisi zisebenza ngokufanelekileyo. Ziyafana ngeendlela ezininzi kodwa nangona kunjalo, kukho umahluko omkhulu. Okokuqala, iPiracetam ibisemarikeni amashumi eminyaka. Ngapha koko, iNoopept yaphuhliswa yiPiracetam kwaye yangena kwimarike kamva.
Kukho umehluko kwindlela ezi zimbini zisebenza ngayo i-Nootropics. I-Piracetam isebenza ngokunyusa umsebenzi we-acetylcholine, ikhemikhali yobuchopho enamandla amakhulu. Esi senzo ke sinceda ukuphucula ukusebenza kwengqondo kunye nememori. IPiracetam isenokunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye nokunciphisa uxinzelelo. Ngakolunye uhlangothi, i-Noopept isebenza ngokuphucula ukusebenza kwe-glutamate. Le yinyurotransmitter enamandla kwingqondo. I-Noopept imane ikhawulezisa ukuhamba kwayo kwiiseli ezahlukeneyo zobuchopho, ekhokelela kwimemori kunye nokunyusa ingqalelo.
Amanqanaba amandla anokwahluka kakhulu phakathi kwezi ziyobisi zimbini. I-Noopept inamandla ngakumbi. Ngapha koko, kuqikelelwa ukuba iphakathi kwama-1,000-5,000 amaxesha anamandla ngakumbi kunePiracetam. Ikwaqwalaselwa njengenye yezona zinamandla zeNootropics kwintengiso. I-Noopept ikwanayo ne-bioavailability ephezulu. Ngamanye amagama, umzimba wakho uya kuyifunxa ngokukhawuleza kwaye kube lula kakhulu xa kuthelekiswa nePiracetam. Ikwathetha ukuba umzimba wakho uyakwazi ukufunxa phantse yonke i-Noopept oyingenisileyo.
Ngenxa yale nto yendalo enamandla kunye ne-bioavailability ephezulu, umthamo ophakanyisiweyo weNoopept uhlala uphantsi ngokuthelekiswa nePiracetam. Ngokomndilili, uyacelwa ukuba ugaye phakathi kwe-10-30 milligrams ngosuku kwi-noopept powder dosage ngelixa unokufuna phakathi kwe-1,200-4,800 yeemiligram zePiracetam ngosuku.
Isebenza njani i-Noopept powder?
Ewe, i-Noopept powder sublingual ifakwe emzimbeni ngomlomo. Xa sele ifikelele kwisisu se-gastrointestinal, inyanzelwa kwigazi apho ihanjiswa ngengqondo. Kulapho kwenzeka khona umlingo. I-Noopept activates glutamate receptors, ii-neurotransmitters ezinamandla kwingqondo. I-peptide e-Noopept ibopha nje kwi-glutamate kwaye ibathintele ekuqhekekeni.
Ukunyuka kwemveliso glutamate kwingqondo kukhokelela ekwandisweni kwememori kunye nokunyusa ingqalelo. I-Noopept isenokunceda ukuphucula ukuhanjiswa kweoksijini kwingqondo yakho. Ukwanda kokubonelela kweoksijini kunceda ukuphucula imisebenzi yengqondo, ekhokelela ekusebenzeni kwengqondo engcono. Kuyenzeka ukuba i-Noopept ibangele ukuba kubekho i-glucose metabolism kwingqondo. Oku kunceda ukuphucula amanqanaba amandla engqondo, anokuba neempembelelo ezilungileyo ekwandiseni ukusebenza kwengqondo.
I-Noopept powder (157115-85-0) Iziphumo
I-Noopept powder nayo inokuba neziphumo ezintle ezimangalisayo, ngakumbi xa ucinga ngento yokuba iyi-Nootropic enamandla kakhulu.
Nazi ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo zeNoopept:
1. Ukuphucula Inkumbulo kunye nokuDodobala koKuhamba
Kukho izifundo ezininzi ezidibanisa ukusetyenziswa kweNoopept yokuphucula inkumbulo kunye nokuqonda kwengqondo. I-Noopept iyaziwa ukuba ibangela imisebenzi ye-glutamate kunye ne-acetylcholine enokukhokelela kwimveliso yeNeurotrophins kwingqondo. Ezi zinto zibalulekile ekuphuculeni ukuyilwa kwememori. Kukho ezinye izifundo ezibonisa ukuba i-Noopept isenokusetyenziselwa ukuphucula ukusilela kwenkumbulo okunxulumene ne-concussion, ukubetha, kunye ne-hypoxia ye-cerebral.
2. Iphatha isifo seAlzheimer
I-Noopept isenokusetyenziselwa ukukhusela ukusilela kwenkumbulo yexesha elide okunxulunyaniswa neAlzheimer's. Kukho ezinye izifundo ezidibanisa i-Noopept kunye nokuveliswa kweekhemikhali ezithile kwingqondo ezinokuthintela amanqanaba okuqala okuwohloka kwengqondo.
3. Inceda ngokudakumba
Nangona kukho uphando olulinganiselweyo kwindima yeNoopept yokujongana nokudakumba, izifundo ezimbalwa esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku zibukeka zithembisa kakhulu. Iyeza lingasetyenziselwa ukunciphisa uxinzelelo.
4. Ukuphatha ukugula ngengqondo
Ungayisebenzisa iNoopept ukunyanga isifo sengqondo esibuhlungu ngenxa yomonakalo wemithambo ye-cerebral kunye namava emva kwesigulo esibuhlungu. Eli chiza linokusetyenziselwa ukuphucula ukusebenza kwememori phakathi kwabantu abaye banengxaki yokubetha.
I-Noopept Dosage, i-Noopept Stack
Ke, ngaba unomdla wokufumana i-Noopept powder ukuba ungayithatha njani? I-Noopept yenye yezona zinto zinamandla kwiNootropics kwimarike. Ngokomyinge, kuyacetyiswa ukuba kuthathwe kwidosi ekhanyayo. Phakathi kweNoopept 10 mg kunye neNoopept 30 mg kufuneka yanele usuku olunye. I-Noopept inokubotshwa kunye nezinye iziyobisi ezininzi.
Isitaki esifanelekileyo seNoopept sinokubandakanya ezi mveliso zilandelayo:
Ihlala ixesha elingakanani i-Noopept powder?
I-Noopept sisiyobisi esinamandla kwaye sinokufumaneka kwi-bioavava. Oku kuthetha ukuba ingena emzimbeni ngokukhawuleza. Ngokomyinge, i-Nootropic iya kuhlala iphakathi kweminyaka engama-20 nama-50 ngaphambi kokuba ifakwe ngokupheleleyo kwaye isetyenziswe. Iziphumo zeli chiza ziphantse zivele kwangoko. Logama nje usebenzisa i-Noopept powder dosage elungileyo, kuya kufuneka ukwazi ukubona iziphumo ngaphakathi kwemizuzu.
Iziphumo ezinokubakho zeNoopept Side
I-Noopept inokuba neziphumo ebezingalindelekanga ezinobungozi, ngakumbi ukuba usela kakhulu kuyo.
Ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo zibandakanya:
Ubungqingqwa beziphumo ebezingalindelekanga zeNoopept powder ziya kwahluka kakhulu kumntu omnye komnye. Nangona kunjalo, ngokusekwe kuphando lwenzululwazi kunye nokuphononongwa kwabasebenzisi, iziphumo ebezingalindelekanga ziyalawuleka. Kuyenzeka ukuba usebenzise eli chiza kwaye ungabi namava ezinye zezi ziphumo zecala. Ngaphandle koko, nkqu nakubantu ababonayo, iziphumo zidla ngokuhamba emva kweeyure ezimbalwa.
I-Noopept Powder Thenga
Ukuba ufuna ukukhangela ngokupheleleyo izibonelelo zeNoopept, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uthenga imveliso ekumgangatho ophezulu kunye neyococekileyo. Zininzi kakhulu iimveliso zohlobo oluqhelekileyo zeNoopept kwezi ntsuku. Ezi mveliso zinqongophele i-potency yentsusa kwaye zinokuba nezindlela ezinobungozi.
Nazi iingcebiso ezimbalwa ezinokukunceda ufumane umxhasi we-Noopept powder onyanisekileyo:
Yiya kwiwebhusayithi yomenzi kwaye ubone ukuba ngaba kukho uluhlu lwabathengisi abakwi-Intanethi abanconywayo. Oku kuya kukunika ikhathalogu yomthengisi we-nootropics oyinyani onokukhetha kuyo.
Jonga ugxeko-ncomo lwabanye abasebenzisi malunga nomthengisi ngaphambi kokuba uthenge. Bathetha ntoni ngemveliso abayithengileyo kunye nenkonzo yabathengi?
Ixabiso eliphantsi liyabiza. I-Noopept ayiphantse ibe yindleko njengoko ubuya kulindela kodwa ayizukuthengisa ngexabiso lokulahla. Kungcono uchithe imali encinci kwaye ufumane imveliso esemgangathweni.
Okokugqibela, ingakanani iminyaka ethengisayo ethengisa iNoopept? Abathengisi be-Nootropics abaye bakwenza oku okwethutyana bathanda ukuba namava ngokwaneleyo kunye nokurekhoda irekhodi ukuhambisa iimveliso ezisemgangathweni.
I-Noopept yenye yezona zinamandla zeNootropics kwintengiso. Iphuhlisiwe kwii-1990s, eli chiza lisetyenziselwa ukuphucula inkumbulo kunye nokuphucula imisebenzi yokuqonda ngokubanzi. Uphengululo lweNoopept apha ngasentla kufuneka luncede ufumane ukuqonda okungcono kwendlela olusebenza ngayo kunye nalapho ungathenga khona xa unokulufuna.
I-Noopept (157115-85-0) Reference
U-Liu Z, u-Peng Y, u-Ma B, u-B K, u-Liu Y, uLanga G, u-Ping G, u-Guo Y. Isichemocokineticstudy kwinoveli ye-anti-HBV ye-arhente imidol hydrochloride kwiigundane. Int J Pharm. Ngo-2014 Jan 30; 461 (1-2): 514-8. doi: 10.1016 / j.ijpharm.2013.12.002. I-PubMed PMID: 24333907.
Ixesha elide JA, Harris NJ, Lammertsma K. Formaldehyde oxime <-> nitrosomethane tautomerism. J I-Org Chem. 2001 Oktobha 5; 66 (20): 6762-7. I-PMID epapashiweyo: 11578232.
UMcIlroy PJ, uRichert ND, uRyan RJ. Iziphumo ze-proteinase inhibitors kwi-adenylate cyclase. Biochem J. 1980 Meyi 15; 188 (2): 423-35. I-PubMed PMID: 7396871; I-PubMed Central PMCID: PMC1161885.
I-2020 Eyona Poweto yeNootropics ye-Noopeptics: Iziphumo, iDosi
I-2020 Umthombo we-Nootropic Choline oMthombo omkhulu we-Citicoline Vs. IAlfa GPC
Thenga eyona Powder Fasoracetam Powder ngo-2020
Isikhokelo sokugqibela seSunifiram vs Unifiram ngo-2020: Yeyiphi engcono?
Ukuhlaziywa kweColuracetam: Amandla eNowotropic eNtsha ngo-2020